Ganacsiga iyo islamka/somalia
Mowduucaan oo noqon doono mid taxanaa oo ku eegi doono islaamka iyo waxa uu kaqabo ganacsiga iyo ganacsiga somalia xiligan halka uu maraayo iyo fursadaha ganacsi ee wadanka kajira iyo qaababka looga ganacsankaro wadanka gudihiisa, dibadiisa iyo isbedelka ganacsi ee wadanka kuyimid, anigoo si,xaqiiqda kusaleesan uga warami xaaladaha ganacsi ee wadanka kajira iyo xiligan casrigaa.
Waxaa hubaalaa in diinteeda islamka si faahfaahsan uga hadashay faa,iidooyinka iyo xeeladaha ganacsi, aayadaha kawaramaayo aad ayey ufarabadan yihiin. Diintu waxay kumagacowday ganacsiga (raadin fadliga Ilaah). Aayadaha kawarami ganacsiga waxaa dabasocda aayadaha faraa,isha sida; jihaadka, zakada, taqwada. Eebe wuxuu suuratu Al-muzamil kusheegay aayada ugu danbeesa “Ilaah waa ogyahay kuwa socda dhulka oo raadin fadligiisa (ganacsi) iyo kuwa jihaadaayo” meelo badan ayaa qur,aanka looga xusan ganagsiga; aayad kastaa waxay kutilmaamtay ganacsiga fadliga Illah. Waxaa halkaa laga garankaraa qiimaha iyo faa,iidada uu islaamku siiyey in laganacsadaa. Sidaa si,lamidaa ayaa diintu udajisay wadiiqooyin lagu ganacsankaro oo marideedu waajib tahay. Reer Qureesh markay nabiga kucaasiyeen Ilaah wuxuu xasuusiyay in nimcooyin badan lasiiyey oo umadaha kale lasiin, waxaa kamidaa inay kacaado yeesheen inay safraan xagaaga(dhanka shaam) iyo jiilalka (dhanka yaman) ganacsi ahaan; Ilaahna kanabad yeelay gaajo iyo cabsi. Waa suurada kaliyaa ee ruq,aanka looga xusan magaca sharafta badan ee reer qureesh – inay umada uga duwanayeen ganacsi – magaalada ay degaan uleeyihiin reer qureesh ee Makka al mukaramah wax dalagaa kamo soobixi jirin misana waxay ahaayeen dad hodanaa!!
Sidoo kale Illah markuu waajib yeelay gudashada xajka wuxuu amray nabbi Ibrahim cs inuu ummadda ogeesiiyo xajka si ay uyimadaan iyagoo lugeen iyo kuwo bog dheer dhamaantood iyagoo u,imaan nacfigooda (ganacsi) ayna xusaan magaca Eebe maalmo kooban. Maalinta Ilaah waajib yeelay midka ugu danbeeya shanta arkaan ee islaamka waa xajkee Illah wuxu kuxusay isla aayadaas ganacsi –runtii mayara qiimaha uu siiyey islaamku in laganacsadaa- shayga kaliyaa ay umadi kuhor marto waa ganacsi sidda xiligan lagagaran yahuuda inay ganacsiga aduunka barkiis heestaan taasoo usaamaxday inay kunoolaadan dhulka islaamka iyagoo tiroyar cadaawo badan. Wax kastoo umadi usir ahaa way lasoo ganacsi tagtay tusaale ahaan, aalada computer-ka qaabka uu kubilaamay iyo sida uu hadda maraayo waxaa gaarsiiyey waa ganacsi, waxa dunidan baaxada weyn isku furaayo waa ganacsi haddii uu ganacsi jirin majireen is aqoonsiga umadaha. Waxa isku xiraayo aadanaha kala jaadka, diinta, afkaa, dhaqankaa, fikirka waa ganacsi. Umadaha horumarka isku sheega-Word development- xiligaan ayey kubaraarugeen arinkaan oo waxay ulabaxeen Globalization – macnaa isku furan dunida balse islaamku xilli horuu arinkaas u,ogaa oo arkaanta gudashada xajka kumuujiyey waxa maantay looyaqaano”Globalizaion”wax kucusubna maahan. Waxaa Bukhaari laga wariyey in musliminta ganacsigoodu isugu keenanijiren moosinka xajka, taasoo markii danbe shaki galisay inay labi niyo suuragal aheen macnaa inay xaj iyo ganacsi iskuwadaan wallow markii danbe suuratu baqara lagu sheegay inaysan wax dhibaa kujirin arinkaa.
Dhanka sunada iyo ganacsiga sidda lawada ogsoonyahay asxaabta kuwooda ugu magac iyo maamuus dheer waxay ahaayeen ganacsato sida, Abuubakar sadiiq, A/raxmaan bin cowf iyo rag kaloo fara badan. Nuurka islaamku wuxuu kuxirnaa dhaqaalahooda. Waayo xiliyada jihaadka aalad kastoo jihaadka loo isticmaali iyagaa keeni jiray sidaa ayuuna islamku iskaga difaaci jiray gaalada – maahan in maantay lalayaabo wadanka marekanka waayo warshada dadkaa iska leh wax dowladi leedahay maahan sidaa ayuu islamkuna ahaa oo uu umadax bananaa ganacsiga .
Ganacsiga siyaabo badan ayuu kuyimadaa maahan oo kaliyaa mid kuxiran lacag oo kaliyaa ama mid badeeco intii maal laga sooqaado meel kale aysan oolin lageeyo –luqada Arabiga waxaa looyaqaan ganacsi “tijaaro” taasoo macnaheedu tahay hodanimo, halka luqadaha qaar looyaqaano horukac iyo siyaalo kalaba. Sifayaashaa iyo kuwa kaleba waxay daliil iyo tusaalooyin uyihiin qiimaha iyo ahmiyada uu leeyahay ganacsiga.
Hadaba waxaan maqaalada danbe uga waramidoonaa haduu Qaadirka ogolaado ---The most popular forms of small and large business enterprise in whole Somalia oo wadanka fadiido uleh waxaa kamidaa qeebahaas 1-service company. -2- retailing.-3- manufacturing company.--4- wholesaling and industrial company oo xiliyadan danbe caan kusoo noqon wadanka. Sidoo darteed dhamaantood mid midaan usoo qaadan wadanka kudihiisa iyo siday ukala ahmiyad sareeyaan taasoo usaamixi cidii dano kaleh inay wadanka maalgalin kusameesato iyo siday ukala dooran laheed intaba.
QORAALADII HORE EE DR. TAQI